laacib » Khabib Nurmagomedov Oo Lagula Taliyey In Aanu Naftiisa Halis Gelinin, Kana Fogaado Inuu La Feedhtamo Floyd Mayweather
Feedhyahanka Muslimka ah Khabib Nurmagomedov ayaa lagula taliyey in aanu noloshiisa halis gelinin, kana baaqsado ciyaarta uu ka dalbaday feedhyahanka reer Maraykan ee Floyd Mayweather oo weligii aan laga badinin.
Dad badan oo si fiican ula socda ciyaaraha feedhka ayaa u qaatay in Khabib oo u dhashay Russia uu iska kaftamayo markii uu codsiga layaabka leh u diray Mayweather oo aan weligii la arag ciyaartoy ka badiyey, kaas oo wada guuleystay 50 dagaal oo uu galay oo ay iska hor yimaaddeen ciyaartooyo faro badan oo aanu midkoodna libin kala hoyanin.
Dadka u haysta inuu iska kaftamayo ka sokow, waxa iyaguna dareenkooda soo bandhigay ciyaartooyada feedhka ciyaara qaarkood, gaar ahaan kuwa legdinta iyo feedhka isku jira ee UFC loo yaqaano, waxaanay ugu baaqeen Khabib in uu ka baaqsado inuu ka hor tago ninka reer Maraykan oo halis gelin kara noloshiisa, isla markaana ay dhici karto inuu naftiisa ku waayo amaba ugu yaraan kasoo gaadhaan dhaawacyo raad xun ku reeba ka joojiya inuu mar dambe garoomada yimaaddo.
Khabib oo Axaddii hadlyey ayaa waxa uu sheegay inuu yahay boqorka hadda, duurkana aanay ku wada jirin laba boqor ee ay tahay inuu midkood ahaado boqorka, isagoo ku hanjabay inuu garaaci doono, hase yeeshee Mayweather oo usoo jawaabay ayaa u sheegay inuu ku sugayo magaalada Las Vegas.
Mayweather oo sannadkii hore garaacay Conor McGregor ayaa waxa uu markaas sheegay inuu la saayirayey ninka ay dagaallamayeen oo uu naftiisa u baqayey, haddiise ay ciyaartu sii socon lahayd waqi yar oo kale aanu u naxariisan ahayn balse nasiib wanaag wareeggii 10-aad ay guushu ku raacday.
Daniel Cormier oo kula taliyey Khabib in aanu la ciyaarin Mayweather
Qofkii ugu dambeeyey ee ka dareen celiyey arrintan, waa feedhyahanka miisaanka culus ee Daniel Cormier oo billado badan oo miisaanka culus ah ku haysta ciyaarta UFC, waxaana uu ka codsaday Khabib inuu joojiyo inuu doonashada Mayweather.
“Khabib waxa u fiican in aanu isku dayin inuu la feedhtamo Mayweather. Waa maxay waxan uu samaynayaa?” Sidaas ayuu yidhi Daniel Cormier.
Isaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu Daniel Cormier mar kale yidhi: “Haddii aanu feedhkan lacag darteed u gelayn ha iska daayo, sababtoo ah waa la garaaci doonaa. Waan jecelahay Khabib shaqsi ahaan, laakiin waxa garaaci doona Mayweather.”
Intaa kaddib waxa uu Daniel Cormier u sheegay in Khabib ay u fiican tahay in aanu xattaa isku deyin ciyaaraha Musaaricada ee lala xidhiidhinayo.
Feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov ayaa kaddib guushii weynayd ee uu ka gaadhay ninkii aflagaadeeyey diinta Islaamka ee Conor McGregor, waxa uu dalbaday inuu la ciyaaro ninka aan weligii dhinaciisa dhulka la dhigin ee Floyd Mayweather oo u dhashay waddanka Maraykanka.
Khabib ayaa waxa uu tilmaamay in uu doonayo in uu la ciyaaro qof kasta oo kasoo badiyey ninka uu sida xun u bahdilay ee Conor McGregor, isla markaana uu kusoo guuleysto halkii lagaga badiyey McGregor, si uu u tuso inuu yahay libaax aanay cidi soo garab istaagi karin.
Khabib oo ay da’diisu tahay 30 jir, toddobaadkii horena wareeggii afraad ku garaacay McGregor oo maalmo ka hor aflagaaddo u geystay Diinta Islaamka ayaa waxa uu tibaaxay inuu doonayo inuu la ciyaaro Floyd Mayweather oo ay da’diisu tahay 41 jir, hase yeeshee 50 jeer oo uu feedhtamay aan hal mar laga badinin.
Khabib oo naf ahaantiisa aan laga badinin 27 jeer oo uu ciyaaray, ayaa inkasta oo lagu riday ganaax uu xayndaabka ciyaaraha feedhka iyo legdinta kaga maqnaanayo muddo, haddana waxa uu sii ballansaday Floyd Mayweather oo sannadkii hore ciyaar lacag badan laga helay ku karbaashay McGregor wareeggii 10-aad.
“Waa ina kaa Floyd, waa inaynu hadda dagaallano.” Sidaas ayuu yidhi Khabib oo bartiisa bulshada ee Instagram soo dhigay muuqaal isaga oo ay is ag-fadhiyaan Leonard Ellerbe oo ah agaasimaha iibka ee ciyaaraha feedhka uu gelayo Mayweather.
Khabib waxa uu ku dooday in Mayweather uu wareeggii 10-aad kaga badiyey McGregor laakiin uu isagu wareeggii afraad ku khaarajiyey, taasina caddayn u tahay inuu Mayweather na ka badin doono, waxaanu yidhi: “Dabcan aniga ayaa ah boqorka sababtoo ah si fudud wuu ka badin kari waayey McGregor aniguna markiiba waan ugu tuuray.”
Khabib waxa kale oo uu isku tilmaamay inuu yahay boqorka xilligan ee feedhka, waxaanu yidhi: “Duurka waxa jooga hal boqor oo kaliya, anagana midkaayo ayaa noqon”